8 Istaraatiijiyad Lagu Kordhiyo Iibkaaga Saamaynta Waxtarka | Martech Zone
Fiidnimadan, waxaan ku maqnaa baskiil wadashaqeyn oo aan dhex mari jirnay huff iyo puff waxaan ka wada hadalnay howlaheena iibka ee ganacsigeenna. Waxaan labadeenaba gabi ahaanba isku raacnay in anshax la'aanta aan ku dalbanay iibkeena ay xanibtay labadeena shirkadood. Wax soo saarkiisa softiweer wuxuu soo jiitaa warshado gaar ah iyo cabirkiisa, sidaa darteed wuxuu horeyba u ogaa cidda rajadiisa ay tahay. Ganacsigeygu wuu kayaryahay, laakiin waxaan si xoogan diirada u saareynaa macaamiisha muhiimka ah ee gaarka ah ee ka faa'iideysan kara gaaritaankeena boggan iyo sidoo kale khibradeena dhanka warshadaha. Nasiib darro, labadeenaba waxaan leenahay liisas bartilmaameed ah oo aruurinayay boodh.
Maaha wax aan caadi ahayn. Shirkadaha aan lahayn xoog iibiye abaabulan iyo shaqaale lala xisaabtami karo ayaa inta badan iibka dib u dhiga illaa ay quus ka muujiyaan inay wax iibiyaan. Go'aankaasina wuxuu u horseedi karaa cilaaqaad macmiil xun iyo filashooyin u dhexeeya macmiilka u baahan iyo shirkadda lacagta u baahan.
Mid ka mid ah talaabooyinka ugu muhiimsan uguna horreeya ee iibka ayaa ah raadinta - taas oo ah geeddi-socodka u-qalmitaanka hoggaamiyeyaasha muujiyey rabitaanka ah in la sameeyo go'aan iibsi. Talaabadani waa mid muhiim u ah xiritaanka heshiisyada sidaas oo kalena, waa in lagu fuliyaa waqtigiisa iyo sida saxda ah si loo xaqiijiyo guusha. Dhab ahaan, tirakoobka ayaa sheegay in iibiyaha ugu horreeya ee wax ku oolka ah ee gaara go'aan qaadashada uu haysto 74% fursad uu ku guuleysto heshiiska haddii ay maareeyaan dejinta aragtida iibsiga. Garret Norris, Tababbarayaasha Ganacsiga ee Sydney
Tababarayaasha Ganacsiga Sydney, La-taliye Australiya ah oo ku takhasusay iibka, suuq-geynta, iyo tababbarka, ayaa soo saaray macluumaadkan dhammaystiran, Siyaabaha Si Fiican Loo Filayo, Taasi waxay dejineysaa 8 xeelado si kordhi waxtarkaaga iibka raadinta:
Raac jadwal joogto ah iyadoo maalin kasta la qoondeeyay subax kasta iyo jadwal toddobaadle ah.
Diirad saar, feejignaan, iyo feejignaan fulinta qorshahaaga.
Fuli farsamooyin kala duwan isla markaana cabir natiijooyinka mid kasta si aad u ogaato halka aad ka helayso saamaynta ugu badan.
Abuur qoraallo sahamin oo tijaabi ereyo kala duwan si aad u aragto waxa ugu saameynta badan. Had iyo jeer si firfircoon u dhageyso si aad u hubiso in jawaabahaagu ay ku wajahan yihiin wadahadalka.
Noqo bixiye xalka weyn adoo qiraya caqabadaha iyo baahiyaha macaamiishaada oo aad u siiso xalal… ka dib adoo raacaya si loo hubiyo guusha ay gaareen.
Ku tababar wicitaan diirran adoo ku xiraya khadka tooska ah ka hor intaadan qabowga u wicin khadka tooska ah si aad u ogaato marka aad taleefanka gaadho.
Samee naftaada hogaamiye feker adoo hubinaya inaad haysato maqaallo warshadeed oo ku saabsan bogagga iyo daabacaadda awoodda leh. Tani waxay ku siin doontaa rajo leh aragti weyn markay ku baaraan adiga iyo sidoo kale shirkaddaada.
Ogow in rajadu aysan iib ahayn, waa fursad ay kula falgalaan hoggaamiyeyaasha, hubiyaan inay u qalmaan, oo ay ku bilaabaan safarkooda iyagoo adeegsanaya mashiinka iibka.
Faahfaahin dheeri ah oo aan isla markiiba u hirgelin doonno kordhinno raadinta iibkeenna waxtarka!
Tags: tababarayaasha ganacsigatababarayaasha ganacsiga sydneywicitaanka qabowshahaadada hogaamintaraadadrajadaSaadaaliniibinta ayaa hogaamisaraadinta iibkawicitaan diiran
Noocyada, Kheyraadka, iyo Xalalka loogu talagalay Ogaanshaha Xayeysiinta Khayaanada